ESI EWEPU IHE N'EZOGHI NA EXCEL - EXCEL - 2019
Wepu akwukwo ozo di na Microsoft Excel spreadsheet
Dịka, ndị na-eji ọrụ iTunes na-eji ndị isi na-achịkwa ngwaọrụ Apple. Karịsịa, ịnwere ike ịnyefe ụda na ngwaọrụ, jiri ha, dịka ọmụmaatụ, dị ka ọkwa maka ozi SMS abata. Mana tupu ụda ahụ dị na ngwaọrụ gị, ị ga-etinye ha na iTunes.
Maka oge mbụ na-arụ ọrụ na iTunes omume, ọ fọrọ nke nta ka onye ọrụ ọ bụla nwee nsogbu ụfọdụ n'ịrụ ọrụ ụfọdụ. Eziokwu bụ na, dịka ọmụmaatụ, na otu nnyefe nke ụda sitere na kọmputa gaa na iTunes, ị ghaghị ịgbaso iwu ụfọdụ, na-enweghị ụda nke a na-agbakwunye na usoro ihe omume ma ghara ịdị.
Kedu ka esi tinye ụda na itunes?
Iji tinye ụda nke gị na ozi na-abata ma ọ bụ kpọọ iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, ị ga-achọ itinye ya na iTunes, wee mezie ya na ngwaọrụ ahụ. Tupu i tinye ụda na iTunes, ị ghaghị ijide n'aka na a na-ahụ isi ihe ndị a:
1. Oge nke ụda olu ahụ abụghị ihe karịrị sekọnd 40;
2. Ụda nwere ụda egwu m4r.
Ị nwere ike ugbua ịchọta ụda dị ka njikere na Ịntanetị ma budata ya na kọmputa, ma ọ bụ mepụta n'onwe gị site na faịlụ ọ bụla na kọmputa gị. Otu ị ga - esi mepụta ụda maka iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na iji ọrụ ịntanetị na iTunes, nke mbụ kọwara na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Hụkwa: Otu esi emepụta ụdaolu maka iPhone ma tinye ya na ngwaọrụ gị
Tinye ụda na iTunes
Ịnwere ike itinye ụda na kọmputa gị na iTunes na ụzọ abụọ: iji Windows Explorer na iji menu iTunes.
Iji tinye ụda na iTunes site na Windows Explorer, ịkwesịrị imepe windo abụọ na ihuenyo n'otu oge: iTunes na nchekwa ebe ụda gị na-emeghe. Naanị ịdọrọ ya na window iTunes ma ụda ahụ ga-adaba na mpaghara ụda, ma ọ bụrụ na a hụ na nuances niile a kọwara n'elu.
Iji gbakwunye ụda na iTunes site n'usoro ihe omume ahụ, pịa bọtịnụ na akuku aka ekpe "Njikwa"wee gaa ịkọwa ihe "Tinye faịlụ na ọbá akwụkwọ ahụ".
Ngwa Windows Explorer ga-apụta na ihuenyo, ebe ị ga-aga na nchekwa ebe echekwara faịlụ egwu gị, wee họrọ ya site na ịpị ya abụọ.
Iji gosipụta mpaghara iTunes nke ana echekwa ụda, pịa aha nke ngalaba dị ugbu a na akuku aka ekpe, wee banye nchịkọta nhọrọ ndị ọzọ na-egosi, họrọ "Ụda". Ọ bụrụ na ịnweghị ihe a, pịa bọtịnụ ahụ. "Dezie menu".
Na windo nke mepee, lelee igbe "Ụda"wee pịa bọtịnụ ahụ "Emere".
Imepe ngalaba "Ụda", ihuenyo ga-egosipụta ndepụta nke faịlụ egwu ọ bụla nwere ike itinye na ngwaọrụ Apple dị ka ụdaolu ma ọ bụ ụda olu maka ozi abata.
Kedu otu esi mekọrịta ụda site na ngwaọrụ Apple?
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ idetu ụda na ngwaọrụ gị. Iji rụọ ọrụ a, jikọọ ya na kọmputa gị (iji eriri USB ma ọ bụ mmekọrịta Wi-Fi), wee pịa na iTunes na akara ngosi ngwaọrụ gosipụtara.
Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Ụda". Ngwaọrụ a ga-apụta na mmemme ahụ naanị mgbe oge agbanyere ụda na iTunes.
Na windo nke mepee, lelee igbe "Nwekọrịta ụda"wee họrọ otu n'ime ihe abụọ ahụ dị: "Ihe niile", ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ụda niile sitere na iTunes gaa ngwaọrụ Apple, ma ọ bụ "Ụda Họrọ", mgbe nke a gasịrị ị ga-achọ ịma ụda ndị a ga-agbakwunye na ngwaọrụ ahụ.
Dezigharị ihe ọmụma na ngwaọrụ site na ịpị bọtịnụ dị n'okpuru window nke window. "Mmekọrịta" ("Tinye").
Site ugbu a, ụda ga-agbakwunyere ngwaọrụ Apple gị. Iji gbanwee, dịka ọmụmaatụ, ụda nke ozi SMS na-abata, mepee ngwa ahụ na ngwaọrụ ahụ "Ntọala"wee gaa mpaghara "Ụda".
Mepee ihe "Ụda Ozi".
Na ngọngọ "Ụdaolu" nke mbụ na ndepụta ahụ ga-abụ ụda onye ọrụ. Naanị ị ga-agbanye ụda ahọrọ, si otú ahụ mee ka ọ daa maka ozi site na ndabara.
Ọ bụrụ na ị ghọtara ntakịrị, mgbe obere oge gasịrị, iji iTunes ghọọ ihe dị mfe ma dị jụụ n'ihi ohere ịhazi ụlọ akwụkwọ mgbasa ozi.
Otu esi enweta faịlụ site na disk diski
Ịtọ ma na-enyere ọnọdụ ụra na Windows 10
Esi esi kwanye vidiyo na kọmputa
Esi eji google search
Esi gee egwu VKontakte
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ PC ma ọ bụ laptọọpụ na Windows 7 na-eche nsogbu nke nbanye nbanye. A na-edozi ọnọdụ a site na iji "akara userpasswords2" nyere iwu na ịkọwa ọzọ onye ọrụ nke ga-ahazi na nhọrọ akaụntụ. N'isiokwu a anyị ga-egosi gị ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na iwu a anaghị arụ ọrụ. GụKwuo
Ntughari ndenye aha site na otu Opera nchọgharị gaa na ozo
Anyị na-ejikọta YouTube na TV